Momba anay - Shandong Classic Heavy Industry Group Co., Ltd.
Shandong Classic Heavy Industry Group Co., Ltd. (antsoina hoe Groupe Klasika) dia indostrian'ny R&D, famolavolana, famokarana, fananganana, trano fivarotana ary ny lozika amin'ny firafitry ny vy, ary manao asa maro samihafa toy ny varotra ara-pitaovana, rindrina lamba eo amin'ny varavarana lamba. haingo, haingo sy haingon-trano sy haino aman-jery ara-kolontsaina. National-Tech Enterprise. Niorina tamin'ny 2012, ny orinasa mahazatra antsoina hoe "Classical World" dia hita ao amin'ny Shandong Yinzhou Industrial Park. Manana orinasa 19 izay manana fananana 3.6 miliara yuan ary fananana raikitra 2 miliara yuan. 956 hekitara, miaraka amin'ny atrikasa famokarana 360,000 metatra toradroa, mpiasa 2 600.
Mifanaraka amin'ny paikady fampivoarana ny "Science and Technology" sy ny "talenta talenta" ny orinasa, ary manambatra ny Profesora Li Yuanqi avy ao amin'ny University Tongji sy ny Profesora Zhou Xuejun avy ao amin'ny University University Shandong Jianzhu ho mpanolotsaina ara-teknika mba hamolavola ekipa mpikaroka siantifika. Toerana fanaovan'ny dokotera fanavaozana ara-pitsaboana ao amin'ny faritany Shandong, ary foibe R&D faritany miaraka amin'izao tontolo izao 500. Mafy ny fiaraha-miasa - manangana ny foibem-pikarohana momba ny rafi-bolongam-pirenena sy ny rafi-pitadiavam-bolongam-pirenena, China National Center toby mpanamory, ary mamolavola maintso fananganana maintso vaovao, rafitra sy vy maorin-drafitra vita amin'ny vy.
NY ZAVA-DEHIBE AZONY